लहान,८ मंसिर । लैगिंक हिंसा अन्तका लागि सबै जुटौ कोहि नछुटौ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आज देखि १६ दिने २६ औं अन्तराष्ट्रिय महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान सिरहामा पनि शुरु भएको छ । ओरेक नेपालद्धारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मुलधार, महिलाको हिंसा बाच्न पाउने अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ आज लहानमा पत्रकार सम्मेलन अभियानको शुरुवात गरेको हो । समाजमा रहेको संरचनात्मक विभेदका अन्त्यका लागि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी महिलाले आत्म सम्मानपुर्वक जीवनआपन गर्न सक्ने उचित वातावरण निर्माणका साथै महिलाको न्यायमा पहुच सुनिश्चितताका लागि पैरवी गर्नु रहेको छ । भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आज १६ दिने अभियानको थालनी भएको हो ।
ओरेक नेपाल सिरहाको वार्षिक अभिलेखिकरण अनुसार जनवरी १, २०१७ देखि नोभेम्बर २३, २०१७ सम्मका १६७ वटा महिलामाथि भएको हिंसाका घटना रिर्पाेटिंग भएका छन । त्यसमा मुक्ति नेपालको अभिलेख अनुरुप थप २ गरी जम्मा १६९ वटा महिला हिंसा सम्बन्धि घटनाको अभिलेखिकरण भएको जानकारी मानव अधिकार संरक्षक केन्द्र संजाल सिरहाका संयोजक गंगा अधिकारीले गराउनु भयो । कार्यक्रममा पत्रकारहरुको जिज्ञासालाई मानव अधिकारकर्मी सुनिल कुमार साह, जिवछी यादव लगायतका अधिकारकर्मीले जानकारी दिएका थिए ।
लहानलाई व्यापारिक राजधानीको रुपमा विकास गर्ने ः विजय गुप्ता
लहान, ८ मंसिर । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी माओवादीको चुनावी मोर्चाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सिरहा क्षेत्र नं. १ को ‘क’ का उम्मेदवार विजय गुप्ताले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न शसक्त कानुन बनाउंने बताउंनुभयो ।
आज लहानको रेडियो सौगातमा सो पार्टीका युवा नेता तथा चुनावी मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका उम्मेदवार गुप्ताले संसदबादी दलहरुलाई यथास्थितिबादी भन्दै अहिलेका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र सरकारको राजनीति भण्डाफोर गर्ने तथा उनिहरु चुनावपछि पनि नसच्चिने भएकाले मुलुकको बैकल्पिक शक्ति माओवादी क्रान्तिकारी भएको दावी गर्नुभयो ।
अहिलेको संघीय संरचना गलत रहेको भन्दै उम्मेदवार गुप्ताले उत्कृष्ट भनिएको संविधान अपुरो रहेको तथा परराष्ट्र नीति पञ्चशिलको आधारमा हुनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता कुल्चदै संविधान मौन रहेको बताउंनुभयो ।
प्रदेशसभाका उम्मेदवार गुप्ताले मुलकलाई स्वतन्त्र र सम्बृद्ध बनाउन १९५० असमान सन्धी खारेज, विप्पा खारेज, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न शसक्त काननु बनाउने, १२ कक्षा सम्म निःशुल्क गर्ने, हरेक प्रदेशमा अस्पताल बनाउने र बैज्ञानिक भुमिसुधार लागु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउंनुभयो ।
गुप्ताले यस क्षेत्रलाई व्यापारीक राजधानीको रुपमा विकास गर्न उद्योग कलकारखाना लगायत विदेश पलायन युवाहरुको रोजगारी सृजना गर्ने बताउंनुभयो । प्रदेशसभाका उम्मेदवार गुप्ताको चुनावी माहौल सवल रहेको अवस्थामा उनका प्रतिस्पर्धी आफुलाई कमजोर महसुस गरिरहेको छ । सिरहा क्षेत्र नं. १ मा बामगठबन्धनबाट लगनलाल चौधरी, मधेशवादी गठबन्धनबाट बैद्यनाथ साह, कांग्रेसका सन्तोष चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस क्षेत्रका उम्मेदवारहरुबीच कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।
रक्सीसहित एक गाडी प्रहरी नियन्त्रणमा
सिरहा, ८ मंसिर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले वेवारिसे अवस्थामा रहेको रक्सिसहितको गाडी सिरहा नगरपालिका वडा नं. २१ बाट बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार मंगलबार सिरहा नगरपालिकाको वडा नं. २१ स्थित बेलुकी अन्दाजी २ बजेको समयमा लक्ष्मीनियादेखि भारतको जोगिया जाने सडक खण्डमा स १ च ११८३ नं. मो महेन्द्रा बोलेरो पिकअप गाडीमा दिलवाले सोफी ५० कार्टुन र गोल्डेन ओक ११ कार्टुन समेत लोड गरिएको अवस्थामा ५ लाख ७७ हजार ९ सय ४० मुल्य बराबरको रक्सी र गाडी फेला परेको छ । फेला परेको गाडी र रक्सी आवश्यक कारवाहीको लागि बुधबार जिल्ला भन्सार कार्यालय खैरटोका माडर सिरहामा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।
चुनावको मुखमा दलहरुको लक्षित गर्दै बम विस्फोटन
लहान ८ मंसिर । निर्वाचन नजिकिंदै क्रममा सिरहालगायत विभिन्न ठाउंमा बम विस्फोटनको घटना घटेको छ । सिरहा क्षेत्र नं. ४ मा मिर्चैयामा बामगठबन्धनको चुनावी सम्पर्क कार्यालयमा आज ३ः४५ बजेको समयमा बम बिस्फोट भएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको सिरहा जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र २ को उम्मेदवार शत्रुघन महतोको गाडीमा फेला परेको वंमको जिम्मा विज्ञप्ती मार्फत गोईत समूहले लिएको छ ।
धनगढीमाई नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा घरदैलोे गर्ने क्रममा शुक्रबार फुलकाहामा आज दिउसो ४ बजे कुकर वंम फेला परेको छ ।
उक्त विस्फोटको जिम्मेवारी अखिल तराई मुक्ति मोर्चाले लिएको छ । जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको मोर्चाले निर्वाचनको विरोधमा वंम राखेको जनाएको छ ।
मसिर ३ गते आईतबारका दिन अपरान्ह ३ बजे सिरहा जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र २ को प्रत्यासी शत्रुघन महतो घर थाना चौक गोलबजामा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र शत्रुघन महतो यात्रा गर्ने गाडीमा प्रेसर कुकर बम राखेको गोइतको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कुटपिटको आरोपमा बुबाआमा पक्राउ
लहान, ८ मंसिर । दूई महिलालाई जवरजस्तीको प्रयास गर्ने देब पुर्बेका आमाबुबालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन् । यसअघि उनी बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि पीडित किशोरी र आमालाई कुट्ने पुर्बेका बुबा आमालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा सिराहाको लाहान नगरपालिकाका पुर्बेका बुबा प्रधुवन पुर्बे, कल्पना पुर्बे, प्रमिला साह रहेका छन् । कुटपिटमा संलग्न दुईजना मुनी पुर्बे, रेखा पुर्बे र सन्तोष साह फरार रहेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको बताइएको छ । उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गराई प्रहरीले थप अनुसन्धान गरीरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय लहानले जनाएको छ । पुर्बेका आमा, बाबु,दिदि बहिनीले पीडित किशोरी र उनकी आमालाई सोमबार गाली गलौज गर्दै मरासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । गत कार्तिक ९ गते राती छठको अवसरमा आयोजित नाच हेर्न जाँदा छिमेकी सन्तोष भन्डारी र देब पुर्बेले किशोरी दिदीबहिनीलाई जबरजस्तीको प्रयास गरेका थिए । पुर्बे ईलाका प्रशासन कार्यालय लहानमा करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । घटनापछि पीडितले जबरजस्ती करणी उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएका थिए । जबरजस्ती गर्न खोज्ने देब पुर्बे र सन्तोष भन्डारी अहिले पनि फरार रहेका छन् ।
अर्को छिमेकीसंग समान्य जग्गाको बिषयमा बिबाद भईरहेको समयमा पिडक पुर्बेका परिवारै सबै आएर घरमा कोही नभएको मौका छोपी किशोरी र उनकी आमालाई सोमबार मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए ।